China Online Turbidity Meter T6570 mveliso kunye nabenzi | Chunye
Imitha yeTree Turbidity ekwi-Intanethi T6570
Umgaqo woluvo lwe-turbidity / sludge sensor yoxinaniso isekwe kukudityaniswa kwe-infrared kunye nokukhanya okusasazekileyo. Indlela ye-ISO7027 ingasetyenziselwa ukuqhubeka nangokuchanekileyo ukumisela i-turbidity okanye i-sludge concentration. Ngokwe-ISO7027 ye-infrared ukukhanya okusasaza itekhnoloji akuchaphazeleka yi-chromaticity ukumisela ixabiso lendlu yoxinaniso. Umsebenzi wokucoca ngokwakho unokukhethwa ngokwemeko yokusetyenziswa.
Idatha ezinzileyo, intsebenzo ethembekileyo; umsebenzi owakhelweyo wokuchonga ngokwakho ukuqinisekisa idatha echanekileyo; ufakelo olulula kunye
Isilinganisi se-intanethi somoya esikwi-intanethi sisixhobo sokuhlalutya esikwi-intanethi esenzelwe ukulinganisa ukungqubana kwamanzi asuka kwimithombo yamanzi, uthungelwano lombhobho kamasipala, inkqubo yokujonga umgangatho wamanzi, ukujikeleza kwamanzi okupholisa, ukusebenza kwamanzi okucoca ikhabhoni, ukungcola kwenwebu, njl. ilindle okanye amanzi amdaka avela kwimizi-mveliso.
Nokuba uvavanya udaka olwenziweyo kunye nayo yonke inkqubo yonyango yebhayoloji, uhlalutya amanzi amdaka akhutshwe emva konyango lokucoca, okanye ubhaqa uxinaniso lwedreyini kumanqanaba ahlukeneyo, imitha yoxinaniso yemitha inokunika iziphumo zokulinganisa eziqhubekayo nezichanekileyo.
85 ~ 265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, ukusetyenziswa kwamandla ≤3W;
9 ~ 36VDC, ukusetyenziswa kwamandla: ≤3W;
Umbane: 0 ~ 9999NTU
Isibonisi esikhulu se-1.Large, unxibelelwano oluqhelekileyo lwe-485, kunye ne-alamu ekwi-intanethi nangaphandle kweintanethi, 235 * 185 * 120mm ubungakanani bemitha, 7.0 intshi enkulu yokubonisa isikrini.
Ixesha lokwenyani lokurekhoda kwi-Intanethi ye-MLSS / SS, idatha yeqondo lobushushu kunye neegophe, ezihambelana nazo zonke iimitha zomgangatho wamanzi wenkampani yethu.
I-4.0-20NTU, 0-400NTU, 0-4000NTU, iintlobo ezahlukeneyo zokulinganisa ziyafumaneka, zilungele iimeko ezahlukeneyo zomsebenzi, ukuchaneka komlinganiso kungaphantsi kwe-± 5% yexabiso elilinganisiweyo.
5.Ukuchaphazela okutsha kwebhodi yamandla kunokunciphisa ifuthe lokuphazamiseka kwe-electromagnetic, kwaye idatha izinzile ngakumbi.
I-6.Uyilo lomatshini wonke alunamanzi kwaye alunathuli, kwaye isiciko sangasemva sesiphelo soqhagamshelo songezwa ukwandisa ubomi benkonzo kwiindawo ezigadalala.
7.Panel / udonga / ufakelo lombhobho, zintathu iindlela ezikhoyo ezifumanekayo ukuhlangabezana neemfuno zofakelo lweendawo zoshishino ezahlukeneyo.
Uluhlu lwemilinganiselo 0-9999NTU
Iyunithi yokulinganisa NTU, mg / L
Isigqibo 0.001; 0.01; 0.1; 1
Iziphumo zangoku Zimbini 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, 0 ~ 20mA
Eminye imisebenzi Ukurekhodwa kwedatha kunye nokubonisa ijika
Ukudlulisa abafowunelwa Iqela le-3: 5A 250VAC, 5A 30VDC
Iimeko zokusebenza Akukho kuphazamiseka kukamazibuthe womeleleyo ngaphandle komhlaba
Ubunzima 1.5 kg
Imilinganiselo 235 × 185 × 120mm
Egqithileyo Imitha yeTree Turbidity ekwi-Intanethi T6070
Okulandelayo: CS6514 Ammonium ion woluvo
Isilinganisi seTurbidity Meter
Iindidi zeemitha zeTurbidity
Iindidi zemitha yeTurbidity
Imitha yokuThambisa aManzi
I-CS1501 yeGlasi yeZindlu ze-pH Sensor
CS1528 pH woluvo
Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Isilumko seChlorophyll, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Ph woluvo Electrode,